Email digest ပြောင်းလဲရယူပါ
'နေ့စဉ်အီးမေးလ်တွေရတာ အရမ်းများတယ်' ဆိုသူများသည် email digest သို့ပြောင်းလဲ ရယူခြင်းဖြင့် Myanmar Network မှ နေ့စဉ်ရရှိနေသည့် အီးမေးလ် အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ Read more
အလုပ်ခေါ်စာများကို Myanmar Network ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ကဏ္ဍ တွင် ကိုယ်တိုင် တင်နိုင်ပါသည်။ Myanmar Network တွင် အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ခေါ်စာကြေငြာများကို မိမိစိတ်ကြိုက် အခမဲ့တင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ခေါ်စာတစ်ခုတွင် Job Title, Organisation Name, Job Location, No. of Position, Closing Date စသည့် အချက်အလက်များပါ ရှိရပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိတို့ ထပ်မံထည့်ချင်သော အချက်အလက်များကို Word File (သို့မဟုတ်) Pdf file ဖြင့် attach လုပ်နိုင်ပါသည်။
Latest discussions on our forum
Started by zar ni (My Way!) in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ. Last reply by khin me me ko Mar 20. 13 Replies 56 Likes
Started by Soe Soe Win in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ. Last reply by khin me me ko Mar 16. 13 Replies 59 Likes
Started by MDF Indochia in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ Jan 16.0Replies0Likes
Writing Winning Proposal course,9- 12 November 2020, Yangon, Myanmar
Ecosystem Mapping & Network Analysis,5-7October 2020, Bangkok, Thailand
IELTS Preparation Talk
IELTS ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်လေ့လာနေသူများအတွက် IELTS စာမေးပွဲတွင် band score 7.5 ရရှိထားသော ဒေါက်တာပိုင်ဖြိုးကိုမှ စာမေးပွဲတွင် စစ်ဆေးမည့် ကဏ္ဍ (၄) ခုဖြစ်သော Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို့၏ စစ်ဆေးမည့် ပုံစံများနှင့် ပြင်ဆင်လေ့လာပုံများကို၂ဝ၁၇ ခုနစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ၌ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ဟောပြောပွဲသို့ မတက်ရောက်နိုင်သည့် IELTS အား လေ့လာနေသူများအတွက် Presentation Powerpoint နှင့် အသံဖိုင် အားပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Presentation Powerpoint Slide အား ဤနေရာတွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
IELTS ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်လေ့လာနေသူများအတွက်IELTS စာမေးပွဲတွင် band score 8 ရရှိထားသော ဒေါက်တာနေညီညီလွင် မှ စာမေးပွဲတွင် စစ်ဆေးမည့် ကဏ္ဍ (၄) ခုဖြစ်သော Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို့၏ စစ်ဆေးမည့် ပုံစံများနှင့် ပြင်ဆင်လေ့လာပုံများကို၂ဝ၁၇ ခုနစ် မေလတွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ၌ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ဟောပြောပွဲသို့ မတက်ရောက်နိုင်သည့် IELTS အား လေ့လာနေသူများအတွက် Presentation Powerpoint Slide နှင့် အသံဖိုင် အားပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Posted by MSF-Holland on May 20, 2020 at 14:250Comments0Likes
Posted by HR_Myanmar_ UNFPA on May 19, 2020 at 17:290Comments0Likes
Posted by MSF-Holland on May 19, 2020 at 17:260Comments0Likes